(Deg Deg) Xasan Cali Kheyre oo Caawa ku wareegaya Guryaha Madaxda Mucaaradka. - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Deg Deg) Xasan Cali Kheyre oo Caawa ku wareegaya Guryaha Madaxda Mucaaradka.
(Deg Deg) Xasan Cali Kheyre oo Caawa ku wareegaya Guryaha Madaxda Mucaaradka.
Xog ay heleyso MOL ayaa shegeysa in Kheyre uu caawa baryo iyo Jilba ka qabsi uu kula dhex wareegayo madaxda Mucaaradka isagoo ka baryaya in loo ogolaado inuu shirka wadatashiga aayaha dalka ee madaxda Mucaradka ay berri yeelanayaan.
Hasa yeeshe Xog ay heshay MOL ayaa sheegeysa in dhammaan madaxdii u la kulmay ay u sheegeen in looga baahan yahay inuu is caddeeyo oo uu si cad u qirto dhammaan khaldaadkii uu galay intii hogaaminayey laanta fulinta, haba ugu horreeyso in uu raalli gelin ka bixiyo falkii lagu weeraray guriga Cabdiraxman Cabdishakur.
Xasan Cali Kheyre ujeedkiisa waa in uu kala jebiya, kala gato, una kala warqaado mucaaradka, ayuu yiri mid ka mid ah madaxda mucaaradka oo diiday inaan magaciisa xeligaan sheegno. Beesha uu ka dhashay Xasan Kheyre ayaa waxay dadaal iyo baryo aan kala go’o lahayn ugu jirtaa sidii loo aqbali lahaa in Kheyre uu ku soo noqdo beelweynta uu sida xun u dhaawacay intii uu hayey hogaanka laanta fulinta.
Dhinaca kale beesha laftigeeda ayaa laga rabaa inay xisaabtanto shalay markii gabood falladan la geysanayey way garab taagneyd Farmajo iyo Kheyre marka maanta maba ahanba inay ka hadlaan Kheyre arrintiisa. Haddii la ixtiraamayo beesha Murasade ha la yimaadaan qof qiimo leh oo lagu ixtiraamo, laakiin tuug, beenlow, khaa’in wali u adeegaya Farmaajo iyo Fahad yaan lagu sirmin. ayuu yiri “masuul la hadlay MOL”
Kheyre waxa uu si ula kac iyo kibir ugalay aan qeyb ka soo qaadanno:
14 Agoosto 2017 Kheyre waxaa uu ahaa nin kii Farmajo u fuliyey, kuna kaalmeeyey in MW Cali Cabdullahi Cosoble xilka laga tuuro, iyadoo 24/10/2017 lagu badalay si musuqmaasu baahsan ah Maxamed Cabdi waare oo sida cad ula dagay H/Shabeelle, kana dhigay sidii ay Kheyre iyo Farmajo rabeen. Kheyre waa ku faraxsanaa
25 Agoosto 2017 Waxaa dad shacbi ah lagu Xasuuqay Bariirre, kuwaas oo dowladdii Xasan Kheyre ay ku sheegtay inay ahaayeen Shabaab. Kheyre waa ku faraxsanaa
28 Agoosto 2017 waxay Kheyre, Fahad iyo Farmajo dalka Itoobiya gacanta u geliyeen halgamaa Somaliyeed Qalbidhagax oo waliba kheyre si Khasab ah golaha wasiirada uga sharciyeey dhiibistiisa. Iyadoo Wasiir Khadija Diiriye ay lahayd “Libax Laba Maaha” Kheyre waa ku faraxsanaa
17 Disember 2017 Waxaa la weeraray Cabdiraxman CabdiShakuur oo Gurigiisa lagu dialy askar ka tirsaneyd ciidanka xooga dalka Somaliyeed kuwaas oo kabahoodii lagu duugay- Kheyre waa ku faraxsanaa. Iyadoo Maalmo ka dibna la wareeray Sanator Cabdi Qeybtiid oo musqusha loogu galay xaaskiisa, balsa Cabdi Qeybdiid waa sarriftay gafkii loo geystay, waana iska aamusay.
08 Abriil 2018 Waxay dowladda Kheyre iyo Farmajo xoog, cagajugleyn, iyo laaaluush kula wareegeen goalaha shacbiga, waxayna eryeen mid ka mid ah ragga ugu aqoonta badan dhinaca shuruucda iyo distuurka gudoomiye Maxamed Sh Cusman Jawaarey. Waxaana Kheyre, Fahad, iyo Farmajo gacantooda ku rimiyeen, kuna dhaliyeen Maxamed Mursal oo la ogyahay tan uu dhigay iyo halkii uu Bralamankii dalka geeyey. Kheyre waa ku faraxsanaa.
4 Disember 2018 Waxay kheyre, Fahad, iyo Farmajo ku Xasuuqeen magaalada Baydhabo shacbi 15 qof ah iyadoo xataa Wakiilkii QM ee ka damqaday dalka laga eryey. Kheyre waa ku faraxsanaa.
08 Juun 2019 Farmajo, Kheyre iyo Fahad waxay lacag malaayiin ah u dhiibeen in Puntland doorashadeeda lagu carqaladeeyo, lana soo saaro shakhsi la yiraahdo jebiye si looga dhigo Puntland sida hadda ay yihiin H/Shabeelle, K/Galbeed iyo Galmudug, waasa lagu gudarreystay. Kheyre waa ku faraxsanaa.
28 Agoosto 2019 Waxaay Kheyre, Farmajo, iyo Fahad ku qadeen dagaal dhinac kasta ah Jubaland oo ay doorashooyin ka socdeen si loo tuuro Axmed Madoobe oo xataa in ciidan Itoobiyaan ah loo adeegsaday. Kheyre waa ku faraxsanaa.
22 Setember 2019 markii lagu guleysan waayey in la rido Axmed madoobe waxaa xayiraad cirka ah lagu soo rogay dhammaan duulimaadyadii rakaabka iyo daawooyinka u keni jiray dadka Jubaland taas oo ah runtii dambi qaran oo ay ahayd in lagu qaado cidii ka mas’uulka ahayd. Sidoo kale waxaa loo diiday inay Kismayo u safraan Madaxweynayaashii hore ee dalka, taas oo iyana ahayd dembi kale. Kheyre waa ku faraxsanaa
25 Julay 2020 Xabaale qode xabaalkiisaa la qodaahe, Kheyre godkiisa ayey biyo ugu soo galeen waxaana talada looga xayuubiyey 7 daqiiqo, iyadoo aan la marsiinin wax sharci ah. Waayo muddo dheer ayuu sharcidarro sameynay, adkeynayey, fulinayeyna in disturka iyo sharciyada dalka lagu tunto. Tolow kheyre ma ku faraxsanaa maalintaa?
In muddo ah ayuu dibadda ku soo wareegayey maalmahan , marnaba meel fagare ah kama sheegin in dowladdii u hogaminayey ay dalka baabi’isay haddana rabto inay dagaal sokeeye dalka gelso. Maanta xataa waxaa uu sheegay inay isku khilaafeen in doorasho laqabto. Sidaas darted mucaaridka KHeyre haka leexdaan ama shacbiga waxay aadayaan cid kale.
Previous articleMahdi Yatakabaruu : “TPLF qoraalkeedii ahaa reer aan Hawiye ahayn Dalkaan Ma xukumi karaa waan Beeninay”
Next articleShirweyne Xasaasi Ah Oo Maanta Musharaxiinta Xilka Madaxweynaha U Furmaya